Ejipta: Fahatsapan’ny Firenena Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Febroary 2018 8:35 GMT
( Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Desambra 2007)
Manana tolona hafa ifanaovany amin'ny masoivoho Israeliana sy Amerikanina ao an-toerana ireo Ejiptianina mpianatra, miaraka amin'ny fijerin'izao tontolo izao mifantoka any Annapolis.
Asehon'ilay Ejiptianina Randa Raafat (Ar) antsika ny fomba fanehoan'ireo Ejiptianina mpianatra sasany ny tsapany momba ireo Ambasadaoro Israelianina sy Amerikanina ao amin'ny fireneny .
Manoratra izy hoe:
Nanomboka nisy zavatra tsara niseho teo afovoan'ireo onja mahery vaikan'ny kolikoly sy tsy firaharahiana.
Ity no zavatra tsara voalohany: nampitombo ny fanahian'ilay Ambasadaoro Jiosy any Cairo ireo vehivavy mpianatra mpiofana ao amin'ny sekoly El Oboor, taorian'ny nifindrany tany amin'ny Villa PrincessFawzia ao amin'ny distrikan'i El Maadi ka nahatonga azy hangataka filaminana noho ny antson'izy ireo isanandro, mitaky ny fandroahana azy handao ny firenena.
Vaovao mahafaly izany, na aiza na aiza no misy ny toeram-ponenan'ny Ambasadaoro, avy amin'ny Villa Al Shabrawy hatrany amin'ny Villa Princess Fawzia. (Samy lova Ejipsianina madio avokoa).
Ny vaovao mahafaly hafa: nanakana ny ambasadaoro Amerikanina tsy hiditra tao amin'ny Oniversiten'i Masoura ny antson'ireo mpianatry ny Oniversite, na teo aza ny fisian'ireo orinasa tsy miankina maherin'ny 17 misahana fiarovana natao hiaro azy.
Tamin'ny fotoana nanaovan'ny Amerikanina, izay miara-miasa amin'i Israely, fihaonambe momba ny fandriampahalemana tao Annapolis no niseho ireo tranga ireo.
Ary indro ny nambaran'ny firenena ..
Tsy misy na iza na iza hanadala anay, mahatakatra ny zavatra rehetra izahay ary mandà ny fihavanana rehetra miaraka amin'i Amerika sy Israely